पासवर्ड बिना यसरि खोल्न मिल्छ अरुको फेसबुक अकाउन्ट : हेर्नुहोस ! – Life Nepali
पासवर्ड बिना यसरि खोल्न मिल्छ अरुको फेसबुक अकाउन्ट : हेर्नुहोस !
काठमाडौँ। तपाइले आफ्नो “फेसबुकको पा’सवर्ड आफूलाई मात्र थाहा छ, म मात्र खोल्न सक्छु भन्ने धारणा” पाल्नुभएको छ भने तपाई गलत” धा’रणामा हुनुहुन्छ । तपाईं बाहेक” पनि अरु कोहीले तपाईंको फेसबुक खोल्न” स’क्छन् । के तपाईंले क’हिल्यै क’ल्पना गर्न स’क्नुहुन्छ” की तपाईंलाई मात्र” पा’सवर्ड थाहा भएको” तपाईंको फेसबुक अ’काउण्ट कसैले पासवर्ड” बिनै म’ज्जाले खोलिदिन सक्छ भनेर ।
हो, यो सत्य कुरा हो । तर यस्ता केही मानिस छन् जसले जो कोहीको पनि फेसबुक अ’काउण्ट बिना कुनै पा’सवर्ड खोलिदिन स’क्छन् । आखिर को होलान् त ती मानिस ? कतै ह्या’कर त होइनन् ? त्य’सोभए त फेसबुक निकै अ’सुरक्षित भ’यो भन्नुहोला । त्यसो पनि होइन, यी मानिसका” का’रण तपाईंको फेसबुक अ’सुरक्षित” होइन बरु अझै बढि सु’रक्षित हुन्छ ।
उनीहरुलाई तपाईको फेसबुक खोल्न पासवर्डको जरुरत नै पर्दैन । ती कुनै ह्या’कर हैनन् ती फेसबुक कम्प’नीकै क’र्मचारी हुन् । फेसबुकले आफ्ना केही कर्मचारीलाई यो सुविधा दिएको छ । वास्तवमा जो कोहीको” फेसबुक अकाउण्ट बिना कुनै पासवर्ड खोल्नसक्ने क्ष’मता अरुमा हुने त कुरै भएन । फे’सबुक प्रयोगकर्ताको सुरक्षाको सु’निश्चितता प्रदान गर्नका लागि आफ्ना केही कर्मचारीहरुलाई फेसबुकले यस्तो अधिकार तथा सु’विधा दिएको हो ।
फे’सबुकले के स्पष्ट गरेको छ भने क’र्मचारीलाई दिइएको यस्तो सुविधाबाट कुनैपनि फेसबुक प्रयोगकर्ताको गोपनियतामा भने कुनै खालको ख’तरा उत्पन्न हुनेछैन । नि’श्चित काम पुरा ग’रुन्जेलका लागि फे’सबुकले आफ्ना क’र्मचारीलाई यस्तो”” सु’विधा दिन लागेको हो । कि’नकी प्र’योगकर्तामाथि वि’श्वासघा’त गर्ने कर्मचारीलाई त’त्कालै ब’र्खास्त” गरिनेछ । यस्तो सु’विधा स’धैँभरी दिइने पनि होइन । निश्चित कर्मचारीलाई निश्चित काम पूरा गरुन्जेल सम्मका लागि मात्र दिइने हो ।-एजेन्सीको सहयोगमा
Previous मैले गर्दा नै एउटा ठूलो यु’द्ध ट’रेको हो : मैले पाउनु पर्ने नोबेल शा’न्ति पु’रस्कार किन अरुलाई दिइयो – डोनाल्ड ट्रम्प
Next संसारकै अग्लो भवन दुबइको बुर्ज खलिफामा चट्याङ पर्यो, यि ब्यक्तिले ७ वर्षदेखि गरेका थिए प्रतिक्षा”